ကျော်ထက်ဝင်း နည်းပညာ တက္ကသိုလ် ဘားအံ နှင့် ဇွဲကပင်မြေ Technological University Hpa-an: Proton Electron Neutron ပရိုတွန် နြူထွန် အီလက်ထရွန် တို့ ရဲ့အရေအတွက်ကို တွက်နည်း
Proton Electron Neutron ပရိုတွန် နြူထွန် အီလက်ထရွန် တို့ ရဲ့အရေအတွက်ကို တွက်နည်း
ဒီနေ့တော့ ခေါင်းစဉ်လေးအတိုင်းပါပဲ။ ပရိုတွန်၊ အီလက်ထရွန်တွေနဲ့ နယူထရွန်တွေ ရဲ့  အရေအတွက်ကို ဘယ်လိုရှာကြမလဲ? တဲ့ ခုရေးမယ့်အကြောင်းမှာ ရှာတယ်ဆိုတာထက် ရှာဖွေဖို့ထက် အခြေခံသိရှိခြင်း ဖော်မြူလာလေးဆို ပိုမှန်ပါတယ်။ တစ်ကယ်လို့ အမှားပါတယ်ဆိုရင်တောင် ခွင့်လွတ်ကြပါ။ ကဲ … ထားပါတော့ ခု ဒီအကြောင်း How to find the number of protons, electrons and neutrons? ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ English လိုရေးသားထားသည်များကို သွားရောက်လေ့လာနိုင်မှာဖြစ်ပေမယ့် ဦးစွာမဏာမတော့ မြန်မာမှု ပြု၍ ဘာသာ ပြန်ဆိုခြင်းကို အောက်မှာ အရင်ရေးသားတင်ပြပါရစေပေါ့ဗျာ …. ဖတ်ရှုအားပေးတော် မူကြပါအုံးနော်
ပရိုတွန်၊ အီလက်ထရွန်တွေ နဲ့ နယူထရွန်တွေ ရဲ့  အရေအတွက်ကို ဘယ်လိုရှာမလဲ?
အက်တမ်မှာရှိတဲ့ ပရိုတွန်၊ အီလက်ထရွန် နှင့် နယူထရွန် အရေအတွက်တို့ကို ရှာဖို့အတွက် အောက်ပါ အဆင့် တွေကတော့လွယ်ကူတဲ့အဆင့်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။
ပထမအဆင့် – အချက်အလက်တွေစုဆောင်းခြင်း ။ ။ပထမဆုံး အဆင့်အနေနဲ့ သင်လုပ်ဖို့လိုတာက သင့် ဒြပ်စင် ရဲ့  အချက်အလက်အချို့  ကိုရှာဖွေဖို့ပဲဖြစ် ပါတယ်။ ဒြပ်စင်တွေကို အစီစဉ်တကျ စဉ်ထားတဲ့ ဇယားကို သွားပြီး သင့်ရဲ့ ဒြပ်စင် ကို(သင်ရှာလိုတဲ့ ဒြပ်စင်) ကိုရွေးချယ်ပါ။ အောက်ပါ ခရစ်ပတန် ဒြပ်စင်အတွက် ဥပမာကို ကြည့်ကြပါစို့ …
ဒုတိယအဆင့် – ပရိုတွန်များ ၏ အရေအတွက်။ ။ ဒြပ်စင်၏ အက်တမ်မှာရှိတဲ့ အက်တမ်အမှတ်စဉ်ဟာ ပရိုတွန်များ၏ အရေအတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ အားဖြင့် ခရစ်ပတန်၏ အက်တမ်အမှတ်စဉ်ဟာ (၃၆) ဖြစ်ပါ တယ်။ ဆိုလိုတာက ခရစ်ပတန် အက်တမ်၏ နျူးကလီးယပ်စ်ထဲမှာ ပရိုတွန် (၃၆) လုံးရှိနေလို့ပါပဲ။ အဲဒီ ခရစ်ပတန်အက်တမ်တိုင်း၏ နျူးကလီးယပ်စ်ထဲမှာ (၃၆) လုံး ပရိုတွန်ပါဝင်နေတာပါ။ တစ်ကယ်လို့ အက်တမ် မှာ ပရိုတွန် (၃၆)လုံးမရှိပါက ဒါဟာ ခရစ်ပတန် အက်တမ် မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ အက်တမ်၏ နျူးကလီးယပ်စ်မှ ပရိုတွန်များ ထပ်ပေါင်းခြင်း သို့မဟုတ် ရွေ့ လျှားခြင်း ဟာ တစ်ခြား (ခြားနားကွဲပြားသော)သော ဒြပ်စင်တစ်ခုကို ဖန်တီးလိုက် တာပါပဲ။ ဥပမာအနေဖြင့် ပြောရရင် ခရစ်ပတန်အက်တမ်မှ ပရိုတွန်တစ်လုံး ထွက်သွား (ရွေ့ လျှားသွား) ပါက ဘရိုမိုင်း အက်တမ်ကို ဖြစ်ပေါ်စေပါ သည်။
တတိယအဆင့် – အီလက်ထရွန်များ ၏ အရေအတွက်။ ။အက်တမ်တွေမှာ ပြီးပြည့်စုံသော (အပြည့်အ၀ ရှိသော) လျှပ်စစ်ဓါတ်မရှိကြပါ။ ဒါဟာ ဘာကိုဆိုလိုတာ လဲဆိုရင် ပရိုတွန်များ ၏ အဖိုလျှပ်စစ်ဓါတ်နှင့် အီလက်ထရွန်များ ၏ အစ်မလျှပ်စစ်ဓါတ်ကြားမှာ တူညီတဲ့ ညီမျှမှု တစ်ခုရှိနေလို့ပါပဲ။ ဓါတ်ပြယ်နေတဲ့ အက်တမ်တိုင်းမှာ ပရိုတွန်တွေနဲ့ အီလက်ထရွန်တွေ၏ အရေ အတွက်က တူညီနေကြပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်ပြောရရင် … ခရစ်ပတန်အက်တမ်မှာ ပရိုတွန်(၃၆) လုံးနဲ့ အီလက်ထရွန် (၃၆) လုံးရှိပြီး အဲဒီအက်တမ်မှာ ပြီးပြည့်စုံသော (အပြည့်အ၀ရှိသော) လျှပ်စစ်ဓါတ်မရှိကြပါ။
အီလက်ထရွန်တွေဟာ အထူးစီစဉ်ထားတဲ့လမ်းကြောင်းထဲမှာ အက်တမ်တွေကို အစီစဉ်တကျ လှည့်ပတ် နေကြပါတယ်။ အက်တမ်တွေက အီလက်ထရွန်ရရှိခြင်း သို့မဟုတ် ဆုံးရှုံးခြင်းကနေ ဖြစ်ပေါ် လာတာကို အိုင်ယွန်လို့ အမည်ခေါ်ဆိုပါတယ်။ အိုင်ယွန်တွေမှာ အက်တမ်များ၏ လျှပ်စစ်ဓါတ် ဘာတစ်ခုမှ ပိုရှိကြပါဘူး။အက်တမ်ကနေပြီးတော့ အီလက်ထရွန်တွေ ပေါင်းသွားတာပဲဖြစ်ဖြစ် ရွေ့ သွားတာပဲဖြစ်ဖြစ် ၎င်း ဒြပ်စင်အနေဖြင့် ပြောင်းလဲခြင်းမရှိပါက။ ဒါဟာ နတ်ချတ် (တစ်နည်းအားဖြင့် ဓါတ်ပြယ်နေသည်) ဟုပြောခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ Net Charge အကြောင်း အောက်မှာ ထပ်ရှင်းပြပါ့မယ်။
ဥပမာ … ခရစ်ပတန် အက်တမ် ၏ ခရစ်ပတန် အိုင်ယွန်မှ အီလက်ထရွန်ရွေ့ သွားတာကို Kr+ ဆိုတဲ့ ပုံစံနဲ့ အမြဲရေးသားကြပါတယ်။ အပေါင်းလက္ခဏာက လျှပ်စစ်ဓါတ်ဖိုဖြစ်ကြောင်းကို ဆိုလိုတာပါ။ ဘာကြောင့် ဒီလိုဖြစ်ရတာလဲဆိုရင် အက်တမ်ကနေထွက်သွားတဲ့ အီလက်ထရွန်က လျှပ်စစ်ဓါတ်အမ အဖြစ်ထွက်သွား လို့ပါပဲ။ ကျန်ရှိခဲ့တဲ့ အီလက်ထရွန် (၃၅) လုံးက ပရိုတွန်လျှပ်စစ်ဖို (၃၆)လုံးထက် အရေအတွက်နည်းပြီး အဲဒီထွက်သွား တဲ့ရလဒ်ကတော့ လျှပ်စစ်ဓါတ်+1 ပဲဖြစ်ပါတယ်။
စတုတ္ထအဆင့် – နယူထရွန်များ ၏ အရေအတွက်။ ။ နယူထရွန်တွေ ၏ အရေအတွက်က ဒြပ်စင်ထဲမှာ အမျိုး အမျိုးရှိနိုင်ပြီး တူညီတဲ့ ဒြပ်စင်တစ်ခု ၏ အက်တမ် (၂) ခုမှာလည်း ကွဲပြားတဲ့ နယူထရွန်တွေရှိကြပါတယ်။ ပြီးတော့အဲဒါတွေကို အိုင်ဆိုတုပ်လို့ ခေါ်ကြပါတယ်။
မည်သည့် ဒြပ်စင်တိုင်းကိုမဆို 36Kr လို အမြဲတမ်းရေးကြပြီး ၎င်းဒြပ်စင် ၏ နာမည်အပြည့်အစုံ အစား သင်္ကေတများအနေဖြင့် ဖော်ပြကြသောအခါ 36Kr or 12C or 26Al ကဲ့သို့ ရေးကြပါတယ်။ အပေါ်မှာပါရှိတဲ့ နံပါတ်လေးတွေကို ဒြပ်ထုအမှတ်စဉ်လို့ခေါ်ကြပြီး ဒြပ်ထုအမှတ်စဉ်တွေဟာ ပရိုတွန်တွေရဲ့ အရေအတွက် ပမာဏ နှင့်တူညီကြပါတယ်။
ဒါကြောင့် သင့်နေအဖြင့် နယူထရွန်တွေရဲ့  အရေအတွက် (ပမာဏ)ကိုရှာချင်လျှင် ဒြပ်ထုအမှတ်စဉ်ထဲ ကနေပြီး အက်တမ်အမှတ်စဉ်ကိုနုတ်လိုက်တာနဲ့ နယူထရွန်တွေရဲ့  အရေအတွက်ကို သင်ရရှိပါလိမ့်မယ်။ ယခု ဖော်ပြတဲ့ ညီမျှခြင်းက ခရစ်ပတန်အက်တမ်အတွက် ဖြစ်လာတာပါ။ နယူထရွန်အရေအတွက်= ဒြပ်ထုအမှတ်စဉ် – အပ်တမ်အမှတ်စဉ်=၈၄-၃၆=၄၈.
ဒါဆိုရင်တော့ အက်တမ်မှာရှိတဲ့ ပရိုတွန်၊ အီလက်ထရွန်တွေ နဲ့ နယူထရွန်တွေ ရဲ့  အရေအတွက်ကို ရှာဖို့ အတွက် အောက်ပါ နည်းလမ်းတွေကို မှတ်မိလိုက်ရုံပါပဲ။
• ပရိုတွန်အရေအတွက်များ = အက်တမ်အမှတ်စဉ်
• အီလက်ထရွန်အရေအတွက်များ = ပရိုတွန်အရေအတွက်များ = အက်တမ်အမှတ်စဉ်
• နယူထရွန်အရေအတွက်များ = ဒြပ်ထုအမှတ်စဉ် – အက်တမ်အမှတ်စဉ်
• ဒြပ်ထုအမှတ်စဉ် = ပရိုတွန်များအရေအတွက် + နယူထရွန်များအရေအတွက်
How to find the number of protons, electrons and neutrons? : To find the number of protons, electrons and neutrons in an atom, just follow these easy steps:
Step 1 – Gather Information ။ ။ The first step you will need to do is find some information about your element. Go to the Periodic Table of Elements and you can select your element from this table. Example, let’s see in the following element for krypton.
Step2– The Number of Protons ။ ။ The atomic number is the number of protons in an atom of an element. Example, krypton’s atomic number is 36. This means that an atom of krypton has 36 protons in its nucleus. There is that every atom of krypton contains 36 protons. If an atom doesn’t have 36 protons, it can’t be an atom of krypton. Adding or removing protons from the nucleus of an atom createsadifferent element. For example, removing one proton from an atom of krypton creates an atom of bromine.
Step3– The Number of Electrons ။ ။Atoms have no overall electrical charge. That means that there must beabalance between the positively charged protons and the negatively charged electrons. Every neutral atom has an equal number of protons and electrons. For example, the krypton atom has 36 protons and 36 electrons and there is no overall charge.
Electrons are arranged around atoms inaspecial way. An atom can gain or lose electrons, becoming what is known as an ion. An ion is nothing more than an electrically charged atom. Adding or removing electrons from an atom does not change which element it is, just its net charge.
For example, removing an electron from an atom of krypton formsakrypton ion, which is usually written as Kr+. The plus sign means that this isapositively charged ion. It is positively charged becauseanegatively charged electron was removed from the atom. The 35 remaining electrons were outnumbered by the 36 positively charged protons, resulting inacharge of +1.
Step4– The Number of Neutrons ။ ။ The number of neutrons in an element can also vary, and if two atoms of the same element have different numbers of neutrons, then they are called isotopes.
The any element is usually written as 36Kr , and when using the symbol for the element instead of its full name: 36Kr or 12C or 26Al. The number is called the mass number, and the mass number is equal to the sum of the number of protons.
So if you want to find the number of neutrons, subtract the mass number from the atomic number, and then you will get the number of neutrons. For krypton atom, this equation becomes: Number of Neutrons = Mass Number – Atomic Number = 84 – 36 = 48.
In this case, to find the number of protons, electrons and neutrons in an atom, just remember these following methods.